Ciidamada NISA oo xiray maskaxdii ka dambaysay weerarkii dekada Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaCiidamada NISA oo xiray maskaxdii ka dambaysay weerarkii dekada Muqdisho
December 27, 2016 Abdi Omar Bile Somalia 0
Maskaxdii ka dambaysay weerarkii Al-Shabaab ee dekada Muqdisho. [Sawirka: Bogga Twitter-ka rasmiga ah ee NISA]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada Haayada Sirdoonka Qaranka ee NISA ayaa soo qabtay maskaxdii ka dambaysay weerarkii Al-Shabaab ee dekada Muqdisho bilowgii bishaan.
Taliyaha NISA ee gobolka Banaadir Maxamed Xasan Faran-fir ayaa xaqiijiyay xiritaanka, sida ay kasoo xigatay wakaalada wararka dowladda Soomaaliya ee SONNA.
Ciidamada NISA ayaa Maxamed Ibraahim Xasan ku soo qabtay howlgal fiidnimadii xalay oo Isniin ahayd ka dhacay Km-50 ee gobolka Shabeellaha Hoose, sida uu sheegay taliyaha NISA.
Ugu yaraan 25 qof ayaa ku dhimatay weerar qarax gaari loo adeegsaday oo ka dhacay dekada Muqdisho bilowgii bishaan, oo ay sheegatay kooxda hubaysan ee Al-Shabaab.
October 22, 2016 Dagaal dib uga qarxay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug